HDR miaraka amin'ny Photoshop, asehonay anao ny fomba fampiharana an'io vokany io amin'ny sarinao | Famoronana an-tserasera
HDR miaraka amin'ny Photoshop
Androany isika dia hianatra ny anjara asan'ny HDR amin'ny Photoshop effects.
Alohan'ny hanombohantsika dia tsy maintsy manazava isika fa ity vokatra ity dia ho hita ao amin'ny kinovan'ny Photoshop farany, manomboka amin'ny kinova CS6 kokoa.
Voalohany, mandeha amin'ny menio izahay Fanitsiana sary ary eo no hahitantsika azy, HDR.
HDR dia nampidirina hamorona antsipiriany bebe kokoa amin'ny sarinay, hanampiana fikitika ny jiro sy ny aloka, ary koa ny antsipiriany.
Rehefa miditra an'io safidy io isika dia ho hitantsika fa misy varavarankely pop-up lehibe miseho, izay mitana ny efijery iray manontolo eo an-tampony. Ary amin'ny maha default anao azy dia maka toetra sasany ny sary.
Ny safidy fomba manolotra antsika amin'ny endrika fanovana HDR:
Ny fampirantiana sy ny gamut dia manolotra antsika hanova toetra roa amin'ny sary.
Ny famatrarana hazavana dia tsy hamela antsika hanova, fa mamela vokadrana tsy misy dikany izany.
Mitovy ny fitoviana.
Fanovana eo an-toerana Io no hazavainay, eto isika dia afaka manova ny famirapiratan'ireo tsipika izay misy amin'ny sary, ny feo ary ny antsipiriany, ary maro hafa.
Manomboka amin'ny tsipika sary. Eto isika dia mamerina mamerina Radiosy sy hery. Na dia manjavozavo kely aza ny teo aloha ny vokatra izay homentsika azy amin'ny Force, ity farany kosa dia mamaritra sy mamaritra bebe kokoa ny sarintsika.
Nomena tanjaka sy fihoaram-pefy kely izahay.
Avy eo ao Tonony sy antsipiriany Ho hitantsika ny sakany, ny fampirantiana ary ny antsipiriany. Sarotra ny nanova ny elanelam-potoana sy ny fivoahana satria singa matanjaka be izy ireo manazava sary na milentika ao anaty haizina. Fa ny antsipiriany kosa, mifanohitra amin'izany dia tsy maintsy miovaova arak'izay mamela antsika hamaritra bebe kokoa, na latsak'izany, ireo faritra samihafa amin'ny sary, nahazoana zavatra hafa tafahoatra amin'ny famaritana, na manjavozavo toa ny nofy.
Mandeha amin'ireo safidy mandroso, hitantsika ireo safidy fantatra amin'ny hoe hazavana sy aloka, ary ireo safidy manampy antsika hanala na hametraka kely loko sy hamafiny amin'ny sary. Nasongadinay ny aloka, nesorinay ny hamafiny ary ny fatrany faran'izay kely indrindra, tsy namelana azy tsy misy loko.
Etsy ambany misy sary hosodoko toa an'io miolakolaka izay notononinay tamin'ny fampianarana hafa eto amin'ny Creativos Online, izay afaka manamboatra ny tenantsika sary tsara raha mahita ny fiolahana voalaza. Ny zavatra tsara eto dia raha avelantsika hisokatra ny safidin'ny topi-maso, hainay jereo izay ataontsika ary esory izany alohan'ny tsindrio OK.
Ary izany no vokatry ny HDR, izay soa ihany fa misy finday sasany nampiditra azy io, fa ny retouching ao amin'ny Photoshop dia tsy maharary mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » HDR miaraka amin'ny Photoshop
Fitsipiky ny fahatelo